သင်၏စီးပွားရေးကဒ်သည်ဘာမှားပါသလဲ။ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 9, 2009 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 9, 2009 Douglas Karr
စီးပွားရေးကတ်ပြားတွေကကျွန်တော့်အတွက်အမြဲတမ်းပျော်စရာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးကဒ်ပြားများနှင့်ကွဲပြားသောအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်အမြဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ငါ့ဓာတ်ပုံနှင့်အတူကဒ်များဘလော့ဂ်ထို့နောက်အထုပ် မှတ်စုများနှင့်မကြာသေးမီက Zazzle မှထုတ်ပေးသည့်ပါးလွှာသောကဒ်။
ဒီနေ့ငါ teleseminar ကြည့်နေတယ် အဲလက်စ် Mandossian ငါစာရင်းသွင်းထားတဲ့စီးပွားရေးပညာရေးစီးရီးတစ်ခုမှာသူဟာအတိတ်ကိုချန်လှပ်ဖို့ငါခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုကိုထောက်ပြခဲ့တယ်။
အများစုမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပစ်ခြင်းခံရသည်။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်တစ် ဦး ပြန်လာရှိပါတယ်ခဲသောအရာတစ်ခုခုကိုပေးဆောင်!
အဘယ်အရာနှင့်အတူတိုးတက်စေနိုင်သည် သင့်ရဲ့ ကျွန်တော့်လုပ်ငန်းကဒ်
အဲလက်စ်ကသင်ထည့်သွင်းသင့်ကြောင်းဖော်ပြသည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု။ တစ်နည်းပြောရလျှင်သင်၏ကဒ်ပေါ်တွင်သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကအရေးယူမှုပြုရန်သင်ပေးနိုင်သည့်တစ်ခုခုရှိပါသလား။ သူ၏ဥပမာမှာကြိုတင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောမက်ဆေ့ခ်ျပါသောနံပါတ် ၁-၈၀၀ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသော၊ လုံခြုံစိတ်ချရသော…၎င်းခေါ်ဆိုသူသည်သတင်းစကားမှအကျိုးရနိုင်သည်။
သင်ပေးပို့သောအဖြစ်အပျက်အတွက်စိတ်ကြိုက်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုထည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နေပါကထိုအဖြစ်အပျက်များအတွက်ကဒ်အချို့ကိုမှာယူပါ။ သင်တစ် ဦး ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာစကားပြောလျှင်, ဖြစ်ရပ်ထည့်သွင်း! သင်တစ် ဦး ညီလာခံမှာဆိုရင် ... ကွန်ဖရထား။ အားဖြင့် ကဒ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ ဖြစ်ရပ်အတွက်, သင်ရုံတစ်ခုနှင့်အတူလက်ခံသူထောက်ပံ့ခဲ့သည် သေးသေးလေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် သူတို့ကိုဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ဗိုင်းရပ်စ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထောက်ပံ့ဖို့သူတို့ကိုဖိတ်ကြားရန်။ အဲလက်စ်ကဒ် ၅၀၀ ထုတ်ပေးသောအခါသူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်ပတ်မှု ၂၀၀၀ ကိုသူမြင်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဗိုင်းရပ်စ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးကဒ်ပြားများကိုအမှာစာမှာယူတော့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံကို (သက်ပြင်းချ!) ထပ်ထည့်မည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များပါသောအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လင့်ခ်တစ်ခုပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ဂူဂဲလ်အသံတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသတင်းစကားကိုကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး။
သင်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုသိပါစေ ငါစီးပှားရေးစီးပွားရေးစီးရီးအတွက်။ ဒါကနည်းနည်းစျေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကတ်ပြားတွေထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်စာချုပ်တစ်ခုတည်းရရင်၊ စီးရီးတစ်ခုလုံးအတွက်ပေးဆပ်ရလိမ့်မယ်။ ငါကပထမဗီဒီယိုပဲ။ ကျွန်ုပ်၏မကြာသေးမီကကဒ်များကိုချီးမွမ်းမှုများစွာရရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဗိုင်းရပ်စ်မရှိတော့ကြောင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခဲ့ကြောင်းမပြောနိုင်ပါ။
Tags: ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်ခန့်မှန်းချက်Facebook ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်Facebook ကိုမိုဘိုင်းကြော်ငြာအသုံးစရိတ်google ပေါင်းကြော်ငြာအသုံးစရိတ်ပုံဆွဲဒီဇိုင်းနာပလက်ဖောင်းsalesforce စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုcloud်းတိမ်သည်လူမှုရေးကြော်ငြာအသုံးစရိတ်twitter ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်
စက်တင်ဘာ 10, 2009 မှာ 12: 31 AM
Alex Mandossian သည် ထိုလူဖြစ်သည်။ Teleseminar တစ်ခု ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ အဆင့်ဆင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပြီးတဲ့အထိ စောင့်ပါ။ တော်တော်များများက မှားနေကြတယ်!!
စက်တင်ဘာ 10, 2009 မှာ 2: 12 AM
Doug ၏အရင်းအမြစ်ကို ကိုးကားကြည့်လိုပါသည်၊ သို့သော် ဤစာကိုဖတ်ဖူးသည့်နေရာကို မမှတ်မိတော့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်- သင့်ပုံပါရှိသော စီးပွားရေးကတ်များသည် အမှိုက်ပုံးထဲသို့ ပစ်ချခံရနိုင်ချေ 50% နည်းပါးပါသည်။ ဒါကို အခြားတစ်ယောက်ယောက်က အတည်ပြုနိုင်တယ်။
စက်တင်ဘာ 10, 2009 မှာ 3: 34 AM
သံသယမဖြစ်မိပါဘူး Bob! အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် စီးပွားရေးကတ်များကို အပြည့်အ၀အသုံးချပါက ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ စီးပွားရေးကတ်များပေါ်တွင် အနည်းငယ်သုံးစွဲကြသည်။
စက်တင်ဘာ 10, 2009 မှာ 3: 48 AM
သင့်ကတ်ကို အမှတ်ရစေမည့်အရာမဟုတ်ကြောင်း သတိရပါ။ အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ သို့မဟုတ် ရုံးသို့ပြန်သောအခါ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် အလားအလာများရရှိခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
10:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 09 မှာ
စက်တင်ဘာ 10, 2009 မှာ 2: 18 AM
သင့်ကတ်များတွင် သင့်လိုဂို၏ သဘောသဘာဝကဲ့သို့ စက္ကူလေယာဉ်ပျံကို အသုံးပြုသင့်သည်။ သင့်ကတ်တစ်ခုလုံးကို ဦးစွာကြည့်သည့်အခါ သင့်လိုဂိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့် ၎င်းတွင် အထက်ဖော်ပြပါပို့စ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်ပါရှိသည်။ လုပ်ရတာ ခက်ပေမယ့် သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ အမှတ်တရဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
စက်တင်ဘာ 10, 2009 မှာ 3: 33 AM
အဲဒါက အရမ်းကောင်းတဲ့ အကြံဉာဏ်ပါ၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုပါ။ အနာဂတ်တွင် ထိုစိတ်ကူးဖြင့် တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ် ကောင်းစွာ တွေးတောနိုင်ပေမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
စက်တင်ဘာ 10, 2009 မှာ 3: 40 AM
Doug သည်ကျွန်ုပ်၏အမည်မသိကိုယ်ပွားကိုစစ်ဆေးပါ၊ ဘလော့ဂ်နှင့်အတူသွားသည် 🙂 Twitter နှင့်အကောင့်ဝင်ပြီးဘာကြောင့်ပေါ်လာသည့်ပုံပါသောတွစ်တာကိုယ်ပွားတစ်ခုရှိသည်
@bcreative - ပုံများကို gravatar.com မှဆွဲယူသည် - တစ်ခုရယူပါ။ 🙂
မတ်လ 1, 2011 မှာ 3: 44 pm တွင်
အစပိုင်းမှာတော့ ခြုံငုံခံစားရတာက ချုပ်ရိုးမပြီးသေးတာကို တွေ့ရမှာပါ။ စာစီစာရိုက်ဘက်မှာ ပိုအလုပ်လုပ်ပြီး ပိုပြတ်သားတဲ့ နောက်ခံက အထောက်အကူဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းရမယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ပေမယ့် ထင်မြင်ချက်တစ်ခုလောက်မေးပါ။